¼-dalana CAN 2019 :: Hitan’ireo teknisiana sasany ny havizanan’ireo mpilalao malagasy • AoRaha
¼-dalana CAN 2019 Hitan’ireo teknisiana sasany ny havizanan’ireo mpilalao malagasy
Nanafana hatrany ny adihevitra eo amin’ireo mpanaraka baolina kitra eto Madagasikara ny fihintsa­nan’ ny ekipam-pirenena malagasy na ny Barea nanoloana an’i Tonizia, afak’omaly, nandritra ny ampahefa-dalan’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika (CAN 2019).
Na dia niarahana nanaiky aza iny faharesena tamin’ny 3 noho 0 iny, dia nisy ny lesoka. Anisan’ny tsy afaka am-bavan’ireo izay nanonta­niana, toa an’ireo teknisiana malagasy, ny mikasika ny havizanan’ireo mpilalaon­-tsika nalahatra hatrany tamin’ireo lalao dimy natrehin’ny Barea, tany Ejipta.
“Midera ny zava-bitan’ny Barea aho. Tantara tsy ho voakosoka no nosoratan’izy ireo ho an’ny baolina kitra malagasy. Nazava kosa anefa tamin’iny lalao farany iny fa heno ny havizanan’ny mpilalao”, hoy Rasoanaivo Etienne na i Titi, mpanazatra nasionaly teo aloha.
Nanamafy an’io lesoka io ihany koa Rafanomezantsoa Oelison na i Careca, mpana­zatra klioba. “Mafy ny dingana vitan’ny Barea”, hoy izy. “Nanao izay ho vitany izy ireo mba tsy hirefarefa amin’ ny tany ny voninahitry ny firenena. Nazava be anefa iny ampahefa-dalana iny noho ny havizanan’ny mpilalao.
Nitambatra avokoa ireo harerahana nanomboka tany amin’ny niandohan’ny fifaninanam-bondrona. Iaraha-mahalala fa ekipa vitsy mpilalao tanora ihany koa ny Barea”, araka ny fanazavany.
Fandraisana anjara voa­lohany ho an’ny Barea ny fihatrehana ny dingan’ny famara­nana tamin’izao CAN, andiany faharoa amby telopolo, tany Ejipta izao. Nahazo vokatra tsara hatrany ka anisan’ireo firenena valo voalohany tamin’ny fifaninanana i Madagasikara. “Efa ela no tokony ho tsara toy ireny ny vokatra azon’ny ekipam-pirenena malagasy. Ireny no zava-bitan’ny mpilalao rehefa tsara ny fanohanana. Nahatsara ny vokatra ihany koa ny fanampian’ny fitondram-panjakana, indrindra tamin’ireo lalao am-pirahalahina. Efa folo taona tany aloha tany no nisy an’izany farany. Mila tohizana ny fikarakarana an’ireo mpilalao ”, hoy kosa ny voalazan-dRajaonarisamba Franck, mpanazatra ny Fosa Junior.
Nampian’i Titi indray fa: “mila miainga any amin’ny tanora mpandimby ny fanohanana”. “Mbola maro ireo asa miandry ny ekipam-pirenena, ka anisan’izany ny fanomanana an’ireo taninketsa. Lesoka hita tamin’ity CAN ity ny lafiny ara-batana. Aman-taonany maro ny fanazarantena ho an’ireo firenena efa ambony haavo teknika”, araka ny namaranany azy.